सुरक्षा निकायकै संग्लनतामा यसरी हुदैछ मेची भन्सारबाट सुपारी तस्करी
१ चैत्र २०७२
पार्थ मण्डल,१,चैत्र, भद्रपुर । माथिल्लो निकायको चलखेलमा नियोजित रुपमा मेची भन्सारको बाटो प्रयोग गरी सुख्खा सुपारी तस्करी गर्ने कारोबारी अझै पक्राउ परेका छैनन् । प्रहरीले गत फागुन १९ गते झापाको मेची भन्सार कार्यालय काकरभिट्टा परिसर भित्रैबाट अम्लिसो कुचो लोड गरिएको ट्रकमा सुख्खा सुपारी बरामद गरेको थियो । बरामद गरिएको सुख्खा सुपारी धुलावारीका कुचो व्यापारी प्रदिप चौधरी, तेजु प्रसाई र सुपारी व्यापारी श्याम पिण्टुको भएको प्रहरी अनुसन्धानबाट…विस्तृत समाचार »
चीनबाट हतियार ल्याउने योजना तुहिएपछि के गर्दैछन् विप्लव ?
विशेष व्युरो,१,चैत्र,फागुन,काठमाण्डौं । सवैभन्दा कान्छो नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादी पछिल्लो समय के गर्दैछ भन्ने आम चासो छ । पछिल्ला ५ महिना गुप्तवास वसेर अस्तीमात्रै आफ्नी छोरीको लगठगाठोमा सार्वजनिक भएका विप्लवबारे त्यत्ती चर्चा नभएपनि विप्लव भने खरतनाक योजनामा लागेको खुलासा भएको छ । पछिल्लो समय वैद्य माओवादी भित्र समेत विभाजन हुने देखेपछि हौसिएका विप्लवले हतियार कहाँबाट ल्याउनेभन्ने सम्मको प्लान गरीसकेको स्रोतको दावी छ । दश…विस्तृत समाचार »
गोलीसहित पक्राउ परेका एमाओवादी सासंद ल्यारक्याल को हुन ? कसरी बनायो माओवादीले सभासद
३० फाल्गुन २०७२
३०,फागुन,काठमाडौँ । एमाओवादीको कोटाबाट सांसद बनेका विवास्पद व्यक्ति ल्यारक्याल लामा १४ थान गोलीसहित पक्राउ परेका छन् । झण्डै १४ महिनाअघि एमाओवादीले विवादास्पद छवि भएका ल्यारक्याल लामालाई ‘सभासद’ नियुक्ति गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले शम्भु पासवान हजरीको संविधानसभा सदस्य खारेज गरेपछि बनेको रिक्त स्थानमा एमाओवादीले लामालाई नियुक्त गरेको हो । प्रचण्डले चिनसंग निकटता वढाउन उनलाई सभाषद वनाएका थिए । यसरी विवादास्पद पात्रलाई एमाओवादीले सभासद बनाएको भन्दै…विस्तृत समाचार »
क्रुर तानशाह हिटलरले यसरी विच्छ्याएका थिए ६ वर्षमा ६० लाख लाश (फोटो कथा )
एजेन्सी । विश्वकै सबैभन्दा क्रुर तानशाह हुन हिटलर । जर्मन तानसाह एडोल्फ हिटलरले गरेको यहुदीहरुको नरसंहारलाई होलोकाष्ट भन्ने पनि गरिन्छ । हिटलरले जर्मनीमा लाखौं यहुदीहरुलाई एकै चिहान बनाएका थिए । पोल्याण्डस्थित एक नाजी क्याम्पमा नस्ल, विचारधारा, मानसिक वा शारीरिक कमजोरीको नाममा लाखौं यहुदीको क्रुर हत्या गरिएको थियो,हिटलरको उपस्थितीमा । ग्यास च्याम्बरमा राखेर र कतिपयलाई गोली हानेर वा झुण्डाएर ६० लाख यहुदीको विभत्स हत्या गरिएको थियो…विस्तृत समाचार »
डिस होम सानो बजारलाई हेरेर आएको होइन
२९ फाल्गुन २०७२
कल्याण अधिकारी, नायब महाप्रबन्धक डिसहोम मिडिया नेटवर्कका नेपालको अत्यन्त विकट मानिने ग्रामिण बस्तीहरूका घरमा अहिले साना स्टिलका छाताहरू देख्न पाइन्छ । हुम्ला, जुम्ला डोल्पाका ग्रामिण भेगदेखि सुविधासम्पन्न मानिने मुलुकको राजधानी काठमाडौका ठुला तारेहोटल, रिसोर्टसम्म एकैखाले टिनका छाता भेटिन्छन् । ति आखिर टेलिभिजन हेर्नका लागि प्रगोग भएका छाता हुन् । नेपालमा पहिलोपटक डिटिएच प्रविधि…विस्तृत समाचार »
आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना १०० रमेश रिजाल ९० तेजुलाल चौधरी ८० हरेश प्रसाद महतो ६४ राम कुमार चौधरी ४८विस्तृत समाचार »
टिप्पणी/केशवराज जोशी महामन्त्रीमा पराजीत भएपछि गगन थापाले एक अनलाइनमा अन्तवार्ता दिदै भनेका थिए कांग्रेस महाधिवेशनका कयौ कथाहरु लेखिदै जानेछन् । जे भयो गलत भयो । उनले आफुलाई युवा नेता नभन्न पनि आग्रह गरे । गगनको त्यो आक्रोश थियो या पीडा त्यसको समिक्षा हुनेछ पक्कै पनि । तर लोकतन्त्र र पाददर्शीताको नारा बोक्ने कांग्रेस र कांग्रेसी कार्यकर्ताको एक निर्णयले पुरै देशले वा राजनीतिले बदनामी खेप्नुपर्र्यो । कुनै…विस्तृत समाचार »
खाडीमा केटी, जुवा र मदिराले बर्षौंसम्म बेखबर नेपालीको कथा (नेपालीको पत्रसहित )
केशवराज जोशी,२९,फागुन,काठमाण्डौं । बाध्यता र विवशताको सांग्लोले बाँधेर गरिबीको चपेटाभित्र रुमल्लिएका नेपाली जिन्दगी खाडी मुलुकमा निकै दर्दनाक बन्दै गइरहेको छ । गाउँमा सयौं हन्डर खाएर शहरमा बाँच्न नसक्ने जिन्दगी अनि भौतारिएका मनहरु, काखभरी लालाबाला, बिहान बेलुका हात मुख जोर्न धौधौ परेपछि बिकल्प खोज्न बाध्य नेपालीहरुको कथा कुनै नरकभन्दा कम छैन विदेशमा । भारतपछि खाडी मुलुक नेपालीको रोजगारीको सजिलो गन्तव्य पनि हो । तर विदेशमा पैसा फल्ने रुख…विस्तृत समाचार »
तस्विरमा हेर्नुहोस्, यसरी काम लाग्छन् थोत्रा कपडा
काठमाडौ ।सबैका घरमा पुराना कपडा हुन्छन् । थोत्रा र पुराना कपडाले सबैलाई तनाव दिन्छन् । न लगाउन मिल्ने नत फाल्न नै मन लाग्ने । कपडा फाल्ना पनि त्यसले वातावरणमा पार्ने प्रभाव अर्कै छ । त्यसैले पुराना र थोत्रा कपडा सबैका लागी टाउको दुखाइको विषय बन्छ । तर अब कपडा पुराना कपडाको चिन्ता छाडड्नुस् । यी कपडालाई पुनर प्रयोग गर्न सकिन्छ । पुराना थोत्रा कपडालाई पेलेर…विस्तृत समाचार »
तस्विरमा हेर्नुहोस् यसरी बन्दै छ नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्ड
सुदिप रेग्मी, २९ फागुन, काठमाडौँ । नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्ड फराकिलो बनाउने काम अहिले जारि छ । अहिले ५ मिटर मात्र फराकिलो रहेको उक्त सडक अब ११ मिटरसम्म फराकिलो बनाउने तयारी भइरहेको छ । ३३ वर्षपछि यो सडक विस्तार गर्न लागिएको हो । सन् १९८२ मा चीन सरकारको सहयोगमा सडक बनेको थियो । हाल उक्त सडकखण्डको १७ किलो भन्ने ठाउँमा पहाड फोर्ने काम भइरहेको छ । सडकलाई…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 967 968 969 970 971 Older Last ›